स्मार्टफोन | Nagarik News - Nepal Republic Media
सामसुङ ग्यालेक्सी ए०३एस बजारमा
स्मार्टफोन ब्रान्ड सामसुङले नेपाली बजारमा ए सिरिजअन्तर्गत नयाँ ग्यालेक्सी ए०३एस सार्वजनिक गरेको छ।
आइफोनका तीन नयाँ 'सिरिज' सार्वजनिक
स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी एप्पल इन्कर्पोरेसनले आइफोन ११ का सिरिज सार्वजानिक गरेको छ। कम्पनीले आइफोन ११,११ प्रो र ११ प्रो म्याक्स गरी तीन फरक विषेशताका नयाँ स्मार्टफोन मंगलबारमात्रै सार्वजनिक गरेका हो।
नागरिक २६ भाद्र २०७६ बिहीबार ३ मिनेट पाठ
ओपोको एफ ११ नेपालमा लन्च
ओपो मोवाइल कम्पनीले आफ्नो एफसिरिज पोर्टफोलियो अन्तर्गत नेपालमा नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ।
नागरिक ११ वैशाख २०७६ बुधबार १ मिनेट पाठ
गत हप्ता कोकाकोलाको भगिनी कम्पनी भिटामिनबाटरले एक वर्षसम्म स्मार्टफोन प्रयोग नगर्ने व्यक्तिलाई एक लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने घोषणा ग-यो। सहभागीले ३६५ दिनसम्म आइफोनको बदला भिटामिनबाटरले उपलब्ध गराएको सामान्य फोन भने प्रयोग गर्न पाउने भन्यो कम्पनीले। उक्त अवधिभर आइप्याड तथा ट्याब्लेट चलाउन नपाउने तर ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्प्युटर थिच्न भने हिस्सेदारको अधिकार भएको बतायो इनर्जी ड्रिंक उत्पादक कम्पनीले।
डा. सुभाष पोखरेल ३ पुस २०७५ मंगलबार १६ मिनेट पाठ
एक दशकसम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी बिक्रीको रेकर्ड बनाएको स्मार्टफोनको ठाउँमा अब नयाँ कुन उपभोग्य वस्तु आउला?
एजेन्सी २८ कार्तिक २०७५ बुधबार ७ मिनेट पाठ
नुबिया स्मार्टफोन सार्वजनिक
आइटिपी नेपाल प्रालिले नेपाली बजारमा चार मोडलका नुबिया स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेका छन् । नुबियाको एमटू लाइट, एन टू, जेट १७ मिनिसको सार्वजनिकसँगै बिक्री सुरु गरेको छ।
नागरिक १९ भाद्र २०७५ मंगलबार १ मिनेट पाठ
सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले हालै इन्फिनिटी डिस्प्लेको साथ नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी जे सिक्स नेपाली बजारमा ल्याएको छ।
नागरिक ३१ असार २०७५ आइतबार १ मिनेट पाठ
मुलुकमा झन्डै ९२ लाखजनाले स्मार्टफोन बोक्ने गरेका छन्। निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको तथ्यांकअनुसार स्मार्टफोन बोक्ने ग्राहकको संख्या तीव्ररुपमा बढिरहेको छ।
सन्तोष न्यौपाने ३० जेष्ठ २०७५ बुधबार ८ मिनेट पाठ
बच्चाहरूलाई कति बेला स्मार्टफोन दिने?
सेली बेल्डविन जर्सनकी जेठी छोरी सोफी सात वर्ष पुग्दैछिन्। यो वर्ष विद्यालय सुरु हुने बेलामा उनी एउटा प्रतिज्ञामा हस्ताक्षर गर्दैछिन् । उनको प्रतिज्ञा छ– कक्षा ८ मा नपुग्दासम्म सोफीलाई स्मार्टफोन नकिन्ने । ‘स्क्रिनमा खर्च हुने समयले बच्चाको विकासमा पार्ने असरबारे म निकै चिन्तित छु,’ जर्सनले भन्छिन्, ‘मेरो बच्चाहरूलाई बाल्यकालका विशेषताहरूबाट टाढा राख्न चाहन्न । यस्ता विशेषतामा विभिन्न खेल खेल्ने, काठ र वरपर खेल्ने र साथीहरूसँग मिलेर खेलौना घर बनाउने जस्ता कुरा र अवस्था पर्छन्।’
नागरिक ५ जेष्ठ २०७५ शनिबार ९ मिनेट पाठ
हुवावेको वाई ९ र वाई ७ स्मार्टफोन
हुवावेले नेपाली बजारमा वाई सिरिजको दुई परिमार्जित स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । हुवावेको नोभा २ आईले नेपाली बजारमा व्यापक सफलता पाएको भन्दै त्यसैको परिमार्जित स्मार्टफोन आइतबार राजधानीमा एक समारोहबीच सार्वजनिक गरेको हो।
नागरिक २६ चैत्र २०७४ सोमबार १ मिनेट पाठ